Maamulka Kooxda Real Madrid oo macallin Jose Mourinho weydiistay inuu iyaga sugo – Gool FM
(Madrid) 17 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay waydiisatay macallin Jose Mourinho inuu iyaga sugo oo uu joojiyo go’aan kasta oo ku saabsan mustaqablkiisa, maadaama ay miisaamayaan booska tababare Zinedine Zidane oo ay rabaan inay ku bedelaan.
Inkastoo kooxdu ay haatan hoggaanka u hayso horyaalka La Liga, waxaa jira waxyaabo aan laga xishoonayn oo la xiriira qaab ciyaareedkooda tartanka Champions League, taasoo keentay inay hal dhibic ka qaataan labadii kulan ee ugu horreeyay Guruubkooda.
Sida uu warinayo Warsidaha Don Balon, Natiijo liidata oo isbuuca soo socda ay kala kulmaan Barcelona kulanka El Clasico ayaa laga yaabaa inay soo gabagabeyso waayihii labaad tababare Zidane ee kooxda Real Madrid, iyadoo Jose Mourinho uu yahay badalkiisa dooqa koowaad.
Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in macallinka reer France uu cadaadis saaran yahay, maadaama uu ku guuldarreystay inuu siiyo daqiiqado ku filan ciyaartooyda sida James Rodriguez iyo Vinicius Junior.
Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu dhawaan la hadlay macallinka reer Portugal oo uu ku booriyay inuusan aqbalin dalab kasta oo ka imaan kara Tottenham Hotspur, maxaa yeelay ku laabashada caasimadda Spain ayaa miiska saarnayd.
Macallin Jose Mourinho ayaa ku guuleystay saddex koob intii uu macalin u ahaa Real Madrid muddadii u dhaxeysay 2010 iyo 2013, waxaana koobabkaas ku jira kan horyaalka La Liga oo uu la qaaday xilli ciyaareedkii 2011/12.
Labada koob ee kale oo uu Jose kula guuleystay Los Blancos ayaana kala ah; Copa del Rey oo uu la qaaday kal ciyaareedkii 2010–11 iyo Supercopa de España oo uu la hantay sanadkii 2012-kii.